September 17, 2021 Xuseen 6
Puntlandtimes (Saaxo)-Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dowladda Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa sheegay in dadka ku nool degaannada Gobolka Mudug ay ahaayeen kuwo si wanaagsan u wada nool, hayeeshee la soo kala dhex-galay.
Guddoomiye Sanyare ayaa waxa uu ku eedeeyey malayshiyaadka Al-Shabaab inay dadka ka faa’iideysteen, isla markaana ay sabab u noqdeen in Colaad beeleedyo ay ka abuurmaan degaannada Gobolka Mudug waa sida uu hadalka u dhigay..
Mudane Cabdiladiif Muuse Nuur, guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland yaa ku dhawaaqay dagaal degaannada Gobolka Mudug looga saarayo Al-Shabaab, waxaana Bulshada uu ugu baaqay inay hubka qaataan oo ay ka qeyb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Ugu dambayntiinta guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa waxaa uu sheegay in Puntland & Galmudug ay ka go’aan tahay la dagaalanka Al-Shabaab dhawaana laga saari doono degmooyinka Ceelbuur iyo Xarardheere.
Gudoomiyuhu geesinimo ayuu ku abtirsaday. Guul iyo garab Alle ku nooloow.
In shabaab laga saaro Ceelbuur iyo Xaradheere waxay u baahan tahay istaraajiyad qotodheer iyo kaalmo middeysan.. Guddoomiye Cabdiladiif waxaa looga baahan yahay in uu qaado qodobada soo socda inta uusan dagaalka kelin.
1-Waa in dagaalka ay ku middeysan yihiin Galmudug, Puntland iyo Dawladda Federaalka
2-Waa in qurba-joogta Puntland iyo Galmudug si middeysan uga qayb qaataan dagaalkaas
3-Waa in saxaafadda Galmudug, Puntland iyo Dawladda Federaalka si middeysan loogu jiheeyo Xoreynta Ceelbuur iyo Xaradheere.
4-Waa in la diyaariyo mucaawinadii loofidinlahaa shacabka ka barakacaya dagaalkaas.
5-Waa in ciidamada maraynka diyaar u yihiin in ay cirka ka duqeeyaan firxadka shabaab.
6-Waa in dagaalka laga hagaa One Command Operation oo uusan noqon jaantaa rogan
Ugu dambeyntii waa in Soomaali meel kasta ay joogaan ka qayb qaataan la dagaalanka argagixisada shabaab oo runtii ah MAFIA diin iyo caqiido shaqo ku laheen.
WAA HADAL CUUUUC IYO CAAC MAXAMUD SALEEBANKU WAA DAD LIITA SIDII DUMARKANA U DHAQMA WAXEEY MOODAN INEY WAX WALBO U SOCDO DAD DAGAALAMA MAHA PUNTLAND WAXA DIFAACA MAJEEERTEN KALE IYO DAROODKA KALE EE DEGAN PUNTLAND
Taas ayaadan been ku sheegin kkkkkkkkkk
Puntland ma waxaa u maleysey maamulka Jeegaanta oo habaryoonis iyo ciidangale laga dhigey maato naaso leh iyo looma ooyaan
Maanta gabooye ayaa ka awood badan habaryoonis iyo ciidangale.
ASHBAAX SAAXIBUL ARDI VS PUDLAND BABY
Khalaas caruurta Pudland.